Ọkara nke ndị bi na UK na-eme atụmatụ ọtụtụ njem n'afọ ọzọ
Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Ọkara nke ndị bi na UK na-eme atụmatụ ọtụtụ njem n'afọ ọzọ
Na -agbasa Akụkọ Europe • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Njem azụmahịa • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • News • ndị mmadụ • Tourism • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akụkọ UK na -agbasa
Azụmahịa a na-akọpụta oke achụmnta ego maka njem n'oge ọrịa a na-efe efe na-egosikwa nke a site na ịrị elu ọnụego ntinye akwụkwọ mgbe ọ bụla mmachibidoro.
Ọkara nke ndị Briten na-eme atụmatụ ezumike abụọ ma ọ bụ karịa na 2022 - yana atụmatụ 70% iwere opekata mpe otu ezumike n'afọ na-abịa, dị ka nyocha wepụtara taa (1 Nọvemba) nke WTM London, ihe omume zuru ụwa ọnụ maka ụlọ ọrụ njem.
Ọzọkwa, mmadụ anọ n'ime ndị na-azụ ahịa 10 bu n'obi imefu karịa na ezumike karịa ka ha mere laa azụ na 2019, ka akwụkwọ akụkọ WTM na-ekpughe.
Ntuli aka nke ndị ahịa 1,000, ewepụtara taa na WTM London, chọpụtara na naanị 16% anaghị eme atụmatụ ịla ma ọlị, ebe 22% na-ekwu na ha ga-enwe otu ezumike na 2022.
Otu ụzọ n'ụzọ atọ (29%) gwara ndị na-eme ntuli aka na ha haziri ezumike ole na ole - gụnyere obere oge ezumike yana ezumike ogologo - ebe 11% kwuru na ha na-atụ anya iwere atọ. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu onye n'ime 10 (9%) kwuru na ha na-eme atụmatụ ime ihe karịrị ezumike atọ.
A bịa na atụmatụ mmefu ezumike, 43% bu n'obi imefu karịa na 2019 na ihe na-erughị otu n'ime 10 (9%) kwuru na ha ga-emefu ihe na-erughị mmefu ego nke 2019.
Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu n'ime isii (17%) gwara nyocha ahụ na ha ga-emefu "nke ukwuu" karịa 2019 - site na oke nke 20% ma ọ bụ karịa - ebe otu ụzọ n'ụzọ anọ (26%) mere atụmatụ na ha ga-emefu ntakịrị karịa - ruo 20% karịa 2019 .
Otu ụzọ n'ụzọ atọ kwuru na ha ga-emefu ihe dịka tupu ọrịa a.
A na-akwado nchoputa nke ndị ahịa site na nyocha n'etiti ụlọ ọrụ njem njem ụwa, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ọkara (44%) nke ụlọ ọrụ 676 jụrụ WTM London na-ekwu na ntinye akwụkwọ ha ga-eru ma ọ bụ karịa ọkwa ndị a hụrụ na 2019. Abụọ n'ụzọ ise (42%) na-ekwu ọkwa ntinye akwụkwọ. afọ na-abịa ka ga-ala azụ n'azụ 2019, ebe 14% ejighị n'aka ma ọ bụ na-amaghị.
Nchọpụta a na-akwado nke ọma maka mgbake nke ụlọ ọrụ njem na-apụ apụ na Britain, na-atụ aro na enwere nnukwu agụụ maka njem nlegharị anya mgbe ọrịa na-efe efe gasịrị dị ka ihe mgbochi dị mfe.
Site na njem mba ofesi na 2020 na 2021 dị n'okpuru ọkwa mbụ Covid, nyocha ahụ na-enye ndị ọrụ, ndị ọrụ na ndị ụgbọ elu olileanya na ntinye akwụkwọ ga-alaghachi ngwa ngwa mgbe njem ga-adị mfe.
Na Septemba, ndị otu azụmaahịa ụgbọ elu UK na ndị na-ahụ maka ụgbọ elu gwara Minista Transportgbọ njem Grant Shapps na ọkọchị 2021 “bụ oge okpomọkụ dị njọ maka ụlọ ọrụ anyị karịa oge ọkọchị 2020,” na-agbakwunye: “A na-ahapụ UK n'azụ n'agbanyeghị mmemme ịgba ọgwụ mgbochi ụwa. ”
Ọdụ ụgbọ elu Heathrow, dịka ọmụmaatụ, hụrụ ọnụọgụ ndị njem 71% gbadara n'August 2021 ma e jiri ya tụnyere otu ọnwa kachasị elu n'oge ọkọchị.
Ebe ọdụ ụgbọ elu London kwụsịrị ịbụ ọdụ ụgbọ elu kacha na Europe na 2019 ruo 10 ka ndị asọmpi gbakere n'ọsọ ọsọ ọsọ.
Ọzọkwa, nchoputa echo ahịa egosi hụrụ n'ebe ndị ọzọ – n'ime oge okpomọkụ, ABTA si n'ji nnyocha chọpụtara na 41% enweela ezumike mba ọzọ akwụkwọ maka ọnwa 12 sochirinụ, na 35% nwere akwụkwọ ezumike mba ọzọ maka okpomọkụ a. Ọnụọgụ ndị a dị ala karịa ka ọ na-adị mana ha na-ekpughe otú ọchịchọ maka njem si dị, n'agbanyeghị ihu igwe siri ike.
Na Hays Travel, ụlọ ọrụ njem kachasị ukwuu na UK, kọrọ uru na August, ekele maka akụkụ nke armada nke ụgbọ mmiri na-enye ụgbọ mmiri n'ime ụlọ n'oge okpomọkụ na gburugburu British Islands.
Simon Press, Onye isi ihe ngosi WTM London, kwuru, sị: “Azụmahịa a na-akọpụta oke achụmnta ego maka njem n'oge ọrịa na-efe efe na-egosikwa nke a site na ịrị elu ọnụego ntinye akwụkwọ mgbe ọ bụla mmachibidoro.
“Otú ọ dị, ejighị n'aka na mgbagwoju anya banyere iwu njem egbochila ọtụtụ ndị ga-abụ ndị na-eme ezumike ruo ugbu a.
"N'inwekwu nchekwube banyere imeghe oke na mbelata mmachi njem, ọ dị ka atụmatụ ezumike niile ejirila ogologo oge ga-emezu, na-enye ụlọ ọrụ ahụ ohere ịgbake ka anyị na-alaghachi n'ụdị njem nkịtị."